Fifanarahana TOP amin'ny herinandro ao Amazon - Jona 2017 | Vaovao momba ny gadget
Isika geeks, Tianay ny teknolojia ary noho izany ny elektronika mpanjifa. Izany no mahatonga antsika mailo hatrany amin'ny karazana tolotra mahaliana mety hipoitra isan'andro. Na izany aza, nanana hevitra tsara kokoa izahay, hitondra tolotra isan-kerinandro ho anao tsy tokony halainao ianao, satria hanana ny atiny elektronika sy gadget tsara indrindra ianao amin'ny vidiny tsy hita lany.
Amin'izay mba, mijanona miaraka aminay ary fantaro izay tolotra mahaliana indrindra amin'ny herinandro Jona farany (manomboka ny 26 Jona ka hatramin'ny 3 Jolay) ary araraoty ny fotoana hanovana televiziona, alao ny telefaona vaovao ...
Ity lahatsoratra ity dia havaozina tsy tapaka isan'andro isan'andro, noho izany mamporisika anao izahay hiverina mba hanamarina ny tolotra vaovao ho an'ilay andro resahina.
1 Fifanarahana Amazon (26 Jona 3 Jolay)
2 Fanomezana dimy euro any Amazon mividy tapakila fanomezana
Fifanarahana Amazon (26 Jona 3 Jolay)
Mahazoa fanomezana mitentina € 150 amin'ny fividianana vokatra Canon tafiditra ao anatin'ity sélection ity: LINK
LG 49 inch TV (4K, IPS) amin'ny € 766 miaraka amin'ny fandefasana ao anatin'ny iray andro
Motorla moto g4 plusFanontana Amazon manokana amin'ny € 179,99 (vidiny taloha € 199,99, tolotra manan-kery hatramin'ny 27 Jona).
JVC HA-EBTS sofina an-tsofina ao amin'ny € 29,90, fihenam-bidy 38% amin'ny vidiny mahazatra mandritra ny 26 Jona.
LG inch 32 Gaming Monitor manomboka amin'ny € 368,18, miaraka amin'ny fihenam-bidy 18% hatramin'ny 2 Jolay
Tsy misy vokatra. amin'ny € 21,99 fotsiny, 45% ny fihenan'ny vidiny hatramin'ny 26 Jona
Fanomezana dimy euro any Amazon mividy tapakila fanomezana
Ny tolotra Amazon mahafinaritra dia miverina izay hahazoantsika € 5 ho fanomezana rehefa mividy fividianana farafaharatsiny € 25 fanomezana. Azonao atao ny mandeha haka ny karatra fanomezanao amin'ireto manaraka ireto LINK. Aza adino fa ho afaka io tolotra io hatramin'ny 30 Jona, Ka tsy hanana andro maro hanararaotana izany ianao. Mahafinaritra izy io ary iray amin'ireo andrasan'ny mpanjifa Amazon mahazatra indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Fifanarahana TOP amin'ny herinandro ao Amazon - Jona 2017
Araceli Guardia dia hoy izy:
Wow, ho ahy io LG 49-inch io! Tiako ny fijerin'ny 4K vahaolana kokoa amin'ny tontonana IPS
Valiny tamin'i Araceli Guardia
tsara ry zareo fa manaitra ahy ry zareo
Valio amin'i alexander